खेलकुद Archives - News20 Media
बल्ल खुल्यो पोर्चुगल बाहिरिनुको रहस्य, रेफ्री तनावमा
July 2, 2021 N20LeaveaComment on बल्ल खुल्यो पोर्चुगल बाहिरिनुको रहस्य, रेफ्री तनावमा
असार १८, काठमाण्डौ युरो कप २०२० फुटबल प्रतियोगितामा साविक विजेता पोर्चुगल र विश्वकप विजेता फ्रान्सबीचको खेल खेलाउने रेफ्री माटेओ लाहोजलाई प्रतिबन्ध लागेको छ । फ्रान्सको पक्षमा विवादास्पद पेनाल्टी दिएपछि स्पेनका रेफ्री लाहोजलाई युरोपियन फुटबल महासङ्घ ९युइएफए०ले यो संस्करणको युरो कप खेलाउन नपाउनेगरी प्रतिबन्ध लगाएको हो । अघिल्ला बिहीबार राति भएको समूह चरणको अन्तिम खेलमा फ्रान्स […]
June 27, 2021 N20LeaveaComment on हजार्डको एक प्रहारले पोर्तुगलको टिम असफल। १-० गोलअन्तरले बेल्जियम क्वार्टरफाइनल प्रवेश।
काठमाडौं, असार १४ युरोकप २०२० प्रतियोगितामा पोर्तुगललाई १-० गोलको अन्तर बनाउदै बेल्जियम क्वार्टरफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। सोमबार विहान सकिएको अन्तिम १६ को खेलमा साविक विजेता पोर्चुगललाई पराजित गर्दै बेल्जियम अन्तिम आठमा पुगेको हो। खेल शुरुभएको ४२ औं मिनेटमा थोर्गन हजार्डले गरेको गोल विजयी गोल बन्यो। खेलमा मेउनियरले हजार्डलाई पास उपलब्ध गराएका थिए। लुकाकु, केभिन डे […]
जर्मनी र पोर्तुगलको एक खेलमा २ नयाँ कीर्तिमान रेकर्ड ।
June 20, 2021 N20LeaveaComment on जर्मनी र पोर्तुगलको एक खेलमा २ नयाँ कीर्तिमान रेकर्ड ।
काठमाडौ, युरोकप फुटबल अन्तर्गत शनिबार भएको जर्मन र पोर्चुगल बिचको खेलमा जर्मनीले ४-२को जित हात पारेको छ । यो संगै जर्मनिले साबिक विजेता पोर्चुगललाई हराउँदै नकआउट चरणमा प्रवेश गर्ने सम्भावनालाई कायम राखेको छ । शनिबार भएको खेलमा जर्मनीले पोर्चुगललाई ४–२ गोलले हराएको हो । खेलमा अग्रता भने पोर्चुगलले लिएको थियो । खेलको १५ औँ मिनेटमा […]
June 8, 2021 N20LeaveaComment on आखिर नेपाल जोर्डनसँग पराजित, विश्वकप छनोट खेल्न पाउने कि नपाउने ?
जेठ २५, काठमाण्डौ विश्वकप तथा एसियन कप फुटबल छनोट खेलमा नेपाल जोर्डनसँग पराजित भएको छ । कुवेतको जाबेर अल अहमद अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा भएको खेलमा नेपाल जोर्डनसँग ३–० गोलले पराजित भयो। जोर्डनको जितमा बाहा फाइजल सिफले दुई र याजन अल अरबले एक गोल गरे । नेपालका रोहित चन्दले जोर्डनका मौसा मोहमद सुलेमानलाई लडाएपछि पाएको पेनाल्टीमार्फत खेलको […]
May 6, 2021 N20LeaveaComment on पाँच–चारको रोमाञ्जक जित निकाल्दै काठमाण्डौ प्लेअफमा
बैशाख २३, काठमाण्डौ काठमाण्डौ रेजर्स नेपाल सुपर लिग एनएसएल को प्लेअफमा प्रवेश गरेको छ । बिहीवार भएको दोस्रो खेलमा विराटनगर सिटी एफसीलाई पाँच–चार गोल अन्तरले हराउँदै काठमाण्डौ पहिलो संस्करणको फ्रेन्चाइज फुटबल प्रतियोगिता एनएसएलको प्लेअफमा प्रवेश गरेको हो । काठमाण्डौको रोमाञ्चक जितमा मेसौके ओलुमोउले ह्याट्रिक गर्दा छिरिङ गुरुङ स्टेफेन बिनोङले एक–एक गोल गरे । दुई गोलले […]
May 4, 2021 N20LeaveaComment on किन भयो आईपीएल २०२१ अनिश्चितकालका लागि स्थगित ?
बैशाख २१, काठमाण्डौ इण्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) २०२१ अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ । बायो बबलमा रहेका खेलाडीमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण हुने क्रम बढ्दै गएपछि यस्तो निर्णय लिइएको हो । आईपीएलका प्रमुख बृजेश पटेलले पीटीआईसँग भने, ‘बायो बबलभित्र कोरोना सङ्क्रमण हुने क्रम बढेपछि लिग अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको हो ।’
May 2, 2021 N20LeaveaComment on आईपीएलमा मुम्बईले चेन्नईलाई चार विकेटले हरायो
बैशाख १९, काठमाण्डौ इन्डियन प्रिमियर लिग आईपीएल क्रिकेटमा मुम्बई ईन्डियन्सले चेन्नई सुपर किङ्ग्सलाई चार विकेटले हराएको छ । दिल्लीमा शनिबार राति भएको खेलमा चेन्नईले दिएको २ सय १९ रनको लक्ष्य मुम्बईले २० ओभरमा ६ विकेट गुमाएर पूरा गरेको हो । मुम्बईका केइरोन पोलार्डले अविजित रहँदै ८७ रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले । उनले ३४ बलमा ८ […]
यी पाँच सङ्केत देखिएमा खोकी कोभिडको लक्षण हुनसक्छ तर, कोरोना सङ्क्रमण फैलिरहेको बेला ज्वरो वा रुघाखोकी लाग्दा पनि कोभिड भएको हो कि भनेर अधिकांशमा डर निकै बढेको पाइन्छ । प्रायजसो सामान्य चिसो र फ्लूजस्तै लक्षण हुने हुँदा सुरुमै कोरोना भाइरसको लक्षण हो भनेर पत्ता लगाउन अलि गाह्रो हुन सक्छ । तर, केही निश्चित तरिकावाट खोकी […]
नेपाल सुपर लिग : चितवनलाई हराउँदै धनगढी शीर्ष स्थानमा
May 1, 2021 N20LeaveaComment on नेपाल सुपर लिग : चितवनलाई हराउँदै धनगढी शीर्ष स्थानमा
बैशाख १८, काठमाण्डौ नेपाल सुपर लिग एनएसएल फुटबल अन्तर्गत आजको पहिलो खेलमा धनगढी एफसीले एफसी चितवनलाई ३–० गोलले हराएको छ । दशरथ रंगशालामा भएको खेलमा धनगढीका लागि निशान लिम्बु,ओलावाले र बुद्धबल तामाङले गोल गरे । आजको जीतसँगै धनगढी सात अंकसहित तालिकाको शीर्ष स्थानमा पुगेको छ । चितवन दुई अंकसहित छैठौँ स्थानमा छ । नेपाल सुपर […]